राफेलले रिफेल बनेछ भारत ?
फ्रान्सबाट भारतले ५ थान राफेल लडाकु विमान किनेर ल्याएछ । अव चीनलाई सबक सिकाउने र चीनको इसारामा चल्ने नेपाललाई ठिक पार्ने दावीसहितको कुप्रचार भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरिरहेका छन् ।
हाँसो उठ्छ, राफेल बनाउने फ्रान्स शक्तिशाली त छ तर विश्व शक्ति भनेर चिनिदैन । ५ थान लडाकु विमान राफेल किनेर भारतले चीन र नेपाललाई ठिक पार्नसक्ने भए राफेल बनाउने फ्रान्सले विश्वलाई नै ठिक पारिसक्थ्यो नि । भिटो पावर भएर पनि घडीको रालो हल्लिएझैं हल्लिएर फ्रान्स बसिरहन्थ्यो र ?
यो यथार्थ भारतले कहिले बुझ्ने ? भारतलाई मनमा त्यति धेरै विश्वास छ भने गोर्खा सेनाबिना राफेल युद्ध लडेर हेरे हुन्छ । चीन लद्दाखमै छ । दोक्लाममै छ । भारतको ढाडमा हाड भए चीनसँग लडेर देखाए हुन्छ । नेपालजस्ता शान्तिप्रिय र आफ्नो सिमाना अतिक्रमण नगर भन्ने देशसँग जोरी खोजेर के गर्ने ?
१ सय ३० करोडको भारतलाई २० करोडको पाकिस्तानले ठेगान लगाइरहेको छ । चीन त परको कुरा । चीन भारतभन्दा सामरिक, आर्थिक कुनै हिसावमा पनि धेरै माथि छ । चीनले तर्साउने नेपालजस्ता क्षिमेकीलाई हो । साना क्षिमेकको विश्वास जित्न नसक्ने भारतले विश्वशक्ति हुने दावा किन गरिरहनु ?